चीन AT01 Easy प्रेस Vape CBD / THC / डेल्टा Oil तेल कार्ट्रिज लीड नि: शुल्क र कुनै भारी धातु संग शुद्ध स्वाद र ठूलो बाष्प कारखाना र निर्माताहरू | Alphagreen vape
AT01 Easy प्रेस Vape CBD / THC / डेल्टा Oil तेल कार्ट्रिज लीड निःशुल्क र शुद्ध स्वाद र ठूलो बाफ संग कुनै भारी धातु
छोटो विवरण ： हामी AT01 सजिलो प्रेस Vape CBD / THC / डेल्टा 8 डिस्पोजेबल Vape कारतूस आपूर्ति गर्दछौं। यो शुद्ध स्वाद र ठूलो बाफ संग छ। हामीसँग एक पेशेवर आर एन्ड डी टीम छ र राम्रो प्रि-सेलिing्ग, सलोइंग सेवा पछि। हाम्रो उत्पादनहरू राम्रो प्रतिक्रिया र उच्च गुणवत्ताको साथ छन्। यो नियम हो कि गुण जीवन हो। तपाईंलाई सहयोग गर्न अगाडि हेर्दै।
एफओबी मूल्य: अमेरिकी डलर ०.7878 - ०.8888 / टुक्रा
न्यूनतम अर्डर मात्रा: १०० टुक्रा
आपूर्ति क्षमता: ,000००,००० टुक्रा / महिना
भुक्तानी सर्तहरू: T / T, PayPal, L / C, D / A, D / P
चीनमा भेप हार्डवेयरको एक निर्माताको रूपमा, हामीसँग सबै भन्दा पेशेवर जीएमपी कार्य-पसल छ। हामी केवल कार्ट्रिजको उच्च प्रकारको मात्र होइन नयाँ प्रकारका डिस्पोजेबल भ्याप पेन पनि प्रदान गर्दछौं। हामी निरन्तर नयाँ उत्पादनहरू विकास गर्दैछौं। हामी हाम्रो ग्राहकहरूको लागि OEM / ODM सेवा प्रदान गर्दछौं, तपाईं सेतो लेबल ग्राहकको रूपमा तिनीहरू मध्ये एक हुन सक्नुहुनेछ। यसका अतिरिक्त,--तारे ग्राहक सेवा सीबीडी भ्याप उद्योगको दीर्घकालीन अवधिमा हाम्रो बृद्धि इञ्जिन हो। बाहेककारतूस र vape कलम, हामी पनि प्रदान गर्नुहोस् vape सामान र अनुकूलित प्याकेजहरू.
१. उत्पाद परिचय AT01 CBD / THC Vape कारतूस
Easy प्रेस AT01 हाम्रो मूल कार्ट्रिज AT01 जस्तै संरचना हो, तर यो अपग्रेड एक हो जुन AT01 सँग तुलना गरिएको छ। किनकि यो फरक टिप-इजी प्रेस क्यापको साथ छ। AT01 कारतूस ट्विस्ट क्यापको साथ छ र टिप बन्द गर्न श्रम तोक्न आवश्यक छ। AT01 Easy प्रेस कारतूस प्रेस क्यापको साथ हो, त्यसैले तपाईंको श्रम र समय बचत गर्नुहोस्। यो अधिक सुविधाजनक र सजीलो हो।
टिप पारदर्शी वा खरानी पूर्वनिर्धारितद्वारा हुन्छ। तर अन्य र colorsहरू पनि ,000००० को एक MOQ को साथ अनुकूलित गर्न सकिन्छ। हामी लोगो मुद्रण र प्याकेजि design डिजाइन समर्थन गर्दछौं।
अधिक महत्त्वपूर्ण, AT01 सजिलो प्रेस कारतूस कम रिसाव दरको साथ छ। यो सजिलै थिच्नुहोस् तर फेरि खोल्न सक्दैन। तसर्थ, तपाईं आफ्नो तेल चुहिन र खेर फाल्ने को बारे मा चिन्ता छैन।
२. उत्पाद प्यारामिटर (विशिष्टता) को AT01 CBD / THC Vape कारतूस
CBD / THC vape कारतूस / सजिलो प्रेस AT01
धातु / पायरेक्स गिलास / सिरेमिक कुण्डल
१.० मिलि / ०.० मिलीलीटर
D 10.5mm र L 42.3 / 51.8mm
तेल सेवन प्वाल
* * १.mm मिमी / १.mm मिमी / २.० मिमी （अनुकूलन आकार）
Product. उत्पाद सुविधा र को अनुप्रयोग AT01 CBD / THC Vape कारतूस
Asy सहज प्रेस टिप, मेसिनको सट्टा हातले थिच्नुहोस्।
- कुनै हेवी मेटल, लीडफ्री प्रकार।
C विभिन्न प्रकारका CBD / THC तेलको लागि सूट।
- कुनै चुहावट डिजाइन।
Pविशेष सिरेमिक फॉर्मूला
U समर्थन OEM / ODM सेवाहरू
Prod. उत्पादन विवरण AT01 CBD / THC Vape कारतूस
Ot पूर्णतया गिलास टिप, कुनै प्लास्टिक छैन। आफ्नो स्वास्थ्यमा नजर राख्नुहोस्
Type टाइपमा थिच्नुहोस्, कुनै लीकिंग डिजाइनको लागि।
Heavy कुनै भारी धातु केन्द्रीय पोष्ट छैन (यदि तपाईं भारी धातुहरूको जोखिम जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको लेख पढ्नुहोस्), छनौटको लागि बिभिन्न सुझाव।
④ उच्च तेल शोषण दर, विभिन्न मोटाई तेलको लागि सूट।
⑤ कस्टम लोगो प्रिन्टिंग र विभिन्न टिप रंग, आफ्नै ब्रान्ड गर्नुहोस्।
मानवलाई भारी धातुहरूको जोखिम के हो?
भारी धातुहरू बाट सावधान रहनुहोस् जसले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ
समाचारमा हामी अक्सर देख्न सक्छौं कि भारी धातुले मानव शरीरलाई केही नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ, विशेष गरी वातावरणमा भारी धातुहरूको प्रदूषण, जसले मानिसलाई बिरामी बनाउँदछ र क्यान्सरलाई पनि निम्त्याउँछ। र भारी धातुहरू जीवनको जताततै हुन्, केवल वातावरणीय प्रदूषण मात्र होइन, महिला साथीहरूले प्रयोग गर्ने कस्मेटिकहरूमा पनि भारी धातुहरू हुन्छन्। यो कल्पना गर्न सकिन्छ कि मानव शरीरलाई यसको हानि धेरै लुकाइएको छ, यो पत्ता लगाउन सजिलो छैन, र धेरै प्रकारका भारी धातुहरू छन्, र मानव शरीरलाई विभिन्न प्रकारका भारी धातुहरूको हानी पनि फरक छ। त्यसोभए भारी धातुको खतराहरू के हो भनेर हेर्न सबैको साथ जानुहोस्
नेतृत्व, सिसा भारी धातु प्रदूषणमा सबैभन्दा विषाक्त भारी धातुहरू मध्ये एक हो। एक चोटि यो मानव शरीरमा प्रवेश गरेपछि यसले मानव मस्तिष्क कोषहरूलाई सीधै क्षति पुर्‍याउँछ, क्यान्सर मानसिक मंदतालाई निम्त्याउँछ, दिमागी मृत्यु र बुढेसकाललाई डिमेन्शिया प्रदान गर्दछ, र क्यान्सर जोखिम। ।
बुध, पारा उपभोग गर्नाले कलेजोमा सीधै प्रवेश गर्दछ, र त्यसपछि दिमागको दृष्टि र स्नायुहरूलाई हानी गर्दछ। पानीमा पाराको ट्रेस मात्रा हुन्छ। यदि यसले पारा-युक्त पानीलाई लामो समयको लागि प्रतिस्थापित गर्दछ, यसले पुरानो विषाक्तता निम्त्याउँछ।
क्रोमियम, सबै भन्दा सीधा हानि मानसिक विकार र अंगहरू को सुन्नपन को कारण छ।
आर्सेनिक, यो भारी धातु छाला pigmentation र असामान्य केराटिनिजेशन पैदा गर्न सक्छ।
Aldehydes रेनल डिसफंक्शन र कार्डियोभास्कुलर र सेरेब्रोवास्कुलर बिरामीहरूको कारण हुन सक्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण खतरा उच्च रक्तचाप हो।
कोबाल्ट छालामा रेडियोएक्टिभ क्षति निम्त्याउन सक्छ।
भ्यानियम, जो मानव हृदय र फोक्सो मा केहि प्रभाव छ, असामान्य प्लाज्मा चयापचय पैदा गर्न सक्छ।
एन्टिमोनी, कोबाल्टले जस्तै, छालामा रेडियो एक्टिभ क्षति छ।
सेलेनियम, सेलेनियमको साथ गम्भिर अधिक वजन भएका व्यक्ति चकित रोगबाट ग्रस्त छन्।
Thallium बहु न्यूरोपेथीको कारण हुन सक्छ।
मैंगनीज थाइरोइडको कार्यलाई असर गर्न सक्छ, र hyperthyroidism प्राप्त गर्न सजिलो छ।
टिनजस्तै, सिसा, अत्यधिक विषाक्त छ र क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ।
मलाई विश्वास छ कि सबैलाई यति धेरै धातुहरूको जोखिम बारे निश्चित समझ छ। भारी धातुहरु मानव शरीर को लागी हानिकारक छ। सब भन्दा गम्भीर क्षति हो कि तिनीहरूले क्यान्सर पैदा गर्न सक्छन् र सीधा जीवन खतरामा। तसर्थ, हामीले हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रदूषण पैदा गर्नुपर्दछ, विशेष गरी वातावरणमा भारी धातु प्रदूषण, जसले यी भारी धातुहरूलाई माटो र पानीमा प्रवेश गर्न सक्छ। जब व्यक्तिहरू यी प्रदूषित पानी र माटोको सम्पर्कमा आउँदछन्, यसले पुरानो विषाक्तता पैदा गर्दछ, जसले शरीरमा समस्याहरू निम्त्याउँछ। रोगहरूले जीवन खतरामा पार्छ।
अघिल्लो: एआईआर बटन एक्टिवेशन भोल्टेज पाम ब्याट्री 10१० थ्रेडको साथ, युनिभर्सल सीबीडी / THC / डेल्टा510१० कार्ट्रिजको लागि सूट
अर्को: AT01 Vape CBD / THC / डेल्टा Cart कारतूस, शुद्ध स्वाद र ठूलो बाफ संग कुनै भारी धातु लेड नि: शुल्क
सीबीडी भेप कार्ट्रिज
सिरेमिक सीबीडी कार्ट्रिज
खाली vape कारतूस
रिफिलिएबल सीबीडी तेल कार्ट्रिज
© प्रतिलिपि अधिकार - २०१०-२०१२: सबै अधिकार सुरक्षित। फिचर गरिएका उत्पादहरू, साइटम्याप, 10१० ब्याट्री, ब्याट्री vape कलम, डिस्पोजेबल vape कलम, रिचार्जेबल vape कलम, cbd vape कलम, सीबीडी तेल vape डिस्पोजेबल, सबै उत्पादनहरू